Tag: lo'da | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 31, 2011 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Waxaa jira buugaag dhowr ah oo aan aqriyay oo saameyn weyn ku yeeshay sida aan ka dareemay internetka iyo suuq geynta guud ahaan. Mid ka mid ah buugaagta ayaa ahaa Mark Earl's Adhigiisa: Sida loo beddelo Dabeecadaha Maskax ahaaneed iyada oo la adeegsanayo Dabeecadeena runta ah iyo tan kale ee ahayd qabiilooyinka Godin: Waxaan kaaga baahanahay inaad na hogaamiso. Inta badan hadal heynta xoolaha iyo qabaa'ilku waa mid aad uwanaagsan… madaxdu waxay ka wada hadleen (sida muuqaalka Godin ee TED video)
Axad, Nofeembar, 4, 2007 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Mawduucayga ku jira bogga wuxuu ahaa iftiin yar labadii usbuuc ee ugu dambeysay - goor dhow ayuu soo qaadan doonaa. Waxaan aad u firfircoonaa aqrinta, hadalka iyo shaqeynta bishii la soo dhaafay waxayna saameyn ku yeelaneysaa baloogga. In kasta oo ay ka kooban tahay hadda, maskaxdaydu waxay la tartameysaa nuxurka toddobaadyada soo socda, markaa hubi inaad ila joogto. Haddii intaas aysan ku filnayn, waxaan ku xiray kafaalaqaade ugu dambeeya ee $ 1,000 Bixinta
Buugga Mark Earl, Herd, wuxuu ii ahaa aqrin adag. Ha u qaadin taas qaab qaldan. Waa buug la yaab leh oo aan ka helay mareegta Hugh McLeod. Waxaan idhi 'adag' maxaa yeelay maahan aragti 10,000 oo lug ah. Xayawaanka (Sida loo beddelo dabeecadda ballaaran iyadoo laga faa'iideysanayo dabeecadeena dhabta ah) waa buug kakan oo si faahfaahsan u faahfaahinaya daraasado fara badan iyo xog si loola yimaado aasaaskeeda asaasiga ah. Sidoo kale, Mark Earls maahan